Disney + ga-abata na Europe otu izu tupu atụ anya | Akụkọ akụrụngwa
Disney + ga-abata na Europe tupu atụ anya ya
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ihe nkiri na usoro, Noticias
Anyị nọ n'etiti "agha" maka ocheeze nke nyiwe nyiwe. Netflix nwere ike dị ike na-achọwanye asọmpi. O doro anya na nke ahụ baara anyị ndị ọrụ uru. Anyị amatala nke ahụ Disney ga-abata tupu ọkwa ọkwa, akwa ozi oma nye ndi n’ele anya n’elu ikpo okwu a.
Anyị na-ahụ otú nyiwe dị ugbu a na-agba mbọ imeju ndị ahịa ha site na ịgbasawanye katalọgụ ha. Usoro ohuru, ihe nkiri ndi emepụtara onwe ha, na ọdịnaya mara mma maka afọ niile. Ihe nke, dị ka anyị na-ekwu, baara ndị ọrụ uru. N'oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ike ịtụkwasị obi na Disney +, ikpo okwu nke na-ekwe nkwa ma na-akpata atụmanya.
1 Ndi Disney + ga enye ọkwa a tụrụ anya ya?
2 Na March anyị nwere ike ịdenye aha na Disney +
Ndi Disney + ga enye ọkwa a tụrụ anya ya?
Anyị maara nnukwu ihe onyonyo nke Disney nwere. a nnukwu katalọgụ nke ahụ etolitewo na afọ ndị na-adịbeghị anya site na inweta site na ụlọ ọrụ Mickey Mouse. Ọmụmụ ihe dịka Pixar, gigantic ụlọ ọrụ dị ka Fox, ikike nke akụkọ ifo sagas dị ka Star Wars, ma ọ bụ ụlọ mmepụta ihe na ọdịnala dị ka iju ha aghọwo ihe onwunwe nke Disney.
Maka ihe a niile, anyị nwere ike ị nweta “alloodo” ihe anyị ga - achọta na Disney +. Ihe ikpo okwu nke nwere ufodu 500 fim na 7.500 usoro ngosipụta, ị nwere ike bụrụ onye ịma aka na-ama jijiji maka ikpo okwu ọ bụla ị na-arụ taa. Karịsịa n'ihi na ga-azọrọ ikike niile ọdịnaya e kenyere inwe ike ịgbasa ozi ha naanị. Ihe nke gha abu ihe siri ike.
Na March anyị nwere ike ịdenye aha na Disney +
Followinggbaso ihe ịga nke ọma na United States mgbe edozi ụfọdụ nsogbu mbụ, European European nwere ike imebi ihe ndekọ niile. Disney + ruru ndị debanyere aha 10 n'ime ụbọchị ole na ole na mbido America, ihe HBO jisiri ike nweta ihe karịrị ọnwa atọ kamgbe igba egbe ya. Wee nweta ya N'ime awa 24, a ga-ebudata ngwa gị karịa ihe karịrị nde ngwaọrụ 3.2.
Ihe ekwuputara na mbụ maka ụbọchị ikpeazụ nke Machị nwere ike ibute n’otu izu. O yiri ka Na March 24, ọtụtụ mba Europe ga-enwe ike ịtụkwasị obi na ngwa ahụ na ọrụ ya niile. Ọrụ na-aghọwanye ihe mara mma ịmara na ọ ga-enwe ọnụahịa Euro 6,99 kwa ọnwama ọ bụ kwa afọ naanị euro 70. You bụ otu n'ime ndị na-echere ịgbanwe Netflix maka Disney +?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Disney + ga-abata na Europe tupu atụ anya ya
You bụ otu n'ime ndị na-ejikọ na họtel nke Wi-Fi mgbe rutere?
Otu esi eme ka ọnọdụ gbara ọchịchịrị na WhatsApp